EYONA TV YEKRISIMESI ILUNGILEYO YOWAMA-2020 - ISIKHOKELO SAKHO MALUNGA NOKUBUKELA- IRADIO TIMES - YINTONI OMELE UYIBUKELE
Eyona TV ingcono yeKrisimesi ka-2020-isikhokelo sakho malunga nokubukela
Eyona Yintoni Omele Uyibukele
Ixesha leKrisimesi selifikile- nangona iimeko zingaqhelekanga- kwaye ngelixa izinto ezininzi zexesha leeholide zahlukile kulo nyaka, inye into esinokubhankisha kuyo bubutyebi obuqhelekileyo beminikelo yeTV.
Ngaphandle konyaka onzima kwimveliso yeTV, iishedyuli zalo nyaka zigcwele kukuzonwabisa kubandakanya neekrisimesi ezizodwa zemiboniso ethandwayo yesizwe.
Kukwakho nezinto ezintsha ezenziwa ngoopopayi zokuyonwabela nosapho luphela, ukubuya komdlalo weqonga wama-80s, kunye needrama ezintsha zodumo - ungasathethi ke ngolwandiso lweefilimu eziphambili ukubukela kumabonwakude kule Krismesi.
Sikhethe ezinye zezona zinto zibalulekileyo zingezantsi, kubandakanya uGqirha Ngubani okhethekileyo weKrisimesi, iWorzel Gummidge 2020 ekhethekileyo kwaye, ewe, idosi yoSuku lweKrisimesi yesiqhelo yokuFowunela uMdlezana -fundelwe okona kulungileyo kwiqela.
Imba ephindiweyo ye-2020 yeRadio Times yekrisimesi iyathengiswa ngoku! Ukufumana okungaphaya malunga nokushicilelwe kwimagazini ekhethekileyo, indlela yokufumana ikopi, kunye nokubona ikhava yethu ebonisiweyo iphila, Cofa apha .
Tsalela umnxeba uMdlezikazi uKrisimesi okhethekileyo- BBC One
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-7: 40 ntambama
Ayizukuba yiKrisimesi ngaphandle kwesiqendu somnyhadala womdlalo weqonga othandekayo kaHeidi Thomas Biza uMdlezana, kwaye lo nyaka ujongeke ngokukodwa ukuba yenye inyani yokwenyani yabathandi balo mboniso.
Isiqendu sibekwe ngoDisemba 1965, wonke umntu kwiNdlu yaseNonnatus ejonge phambili kwimibhiyozo yesiko nazo zonke izinto ezincitshisiweyo - kodwa izinto zihamba kancinci. Udade uMonica Joan uleqiwe esibhedlele, uTrixie unomsindo wokufumana umrhumo kwi-Bureau yoMtshato njengesipho seKrisimesi kwaye ukudibana kwakhona okumangalisayo kukaShelagh kumbandakanya ekuzalweni okuchukumisayo. Kwaye kukho imbonakalo yeendwendwe nguPeter Davison njengomphathi weseksi ofika ePoplar!
UThomas uthethe ngokubaluleka kokufumana isiqendu sigqitywe ngexesha leKrisimesi, ukongeza okuqhelekileyo kwixesha lesiphithiphithi, kwaye iqinisekile ukuba yinto ephambili kubalandeli abaninzi betelly.
Ugqirha Ngubani: Uguquko lweDaleks-BBC Inye
UJodie Whittaker njengoGqirha kwi-Revolution ye-Daleks (BBC)
Iimoya: Usuku lonyaka omtsha, ngo-6: 45 ntambama
IKrismesi ihlala ingcono xa kukho uGqirha oKhetheke kuye, kwaye ngethamsanqa ngoGqirha weshumi elinesithathu kaJodie Whittaker kunye no-co. Babuyela kwisiqendu somnyhadala.
Uguquko olulindelwe ngokutshisayo lwe-Daleks luqala ngoGqirha uvalelwe kwintolongo yabemi abangahambi ngokhuseleko emva kweziganeko zothotho lwe-12, ngelixa uYaz, uRyan noGraham kufuneka babuthabathe ubomi babo ngaphandle kwakhe.
Ngokukhawuleza baya kuphinda babuyele kwii-adventures ngexesha kunye nendawo, nangona kunjalo, xa befumanisa isicwangciso esiphazamisayo esenza iDalek…
Ngqongqo: Ukubalwa kweKrisimesi -BBC One
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-4: 45 ntambama
Ngelishwa akuyi kubakho krismesi yesiqhelo engqongqo kulo nyaka njengesiphumo sobhubhane we-coronavirus - kodwa abalandeli baya kuba nakho ukufumana idosi ye-ballroom extravaganza ngexesha leholide kunye nale ekhethekileyo.
Ngqongqo: Ukubalwa kweKrisimesi kuya kutyhila imidaniso engama-25 engalibalekiyo ngalo lonke ixesha evotelweyo ngababukeli, ukusukela kwiminyaka engamashumi amane egqibeleleyo, iindlela zokuphumelela indebe, imidaniso esenze ukuba sihleke, mhlawumbi ezinye zikhunjulwe ngezinye izizathu…
I-EastEnders iKrisimesi ekhethekileyo - i-BBC One
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-9: 10 ntambama
IKrisimesi ihlala ilixesha elimangalisayo eWalford kwaye kujongeka ngathi ayizukuhluka ngo-2020, kunye neenkcukacha ezimbalwa esele zichaziwe ziinkwenkwezi zesepha kunye neqela lokuyila-iphepha lethu labaphangi beKrisimesi le-EastEnders ligcwele, ngokwenene!
Ngokomvelisi olawulayo uKate Oates, kuyakubakho ibali elikhulu lokonwaba elibona ukubuya komlinganiswa owaziwayo-nangona ubunini balowo mntu uhlala esongelwe okwangoku.
IBritish's Got Talent IKrisimesi Ebonakalayo - i-ITV
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-8pm
Olu hlelo lukhethekileyo lweKrisimesi kukhuphiswano lweetalente oludumileyo, iBritish's Got Talent, luza kubona u-Ant no-Dec bamkela ezinye zezinto ezingalibalekiyo ezivela kwimbali yeminyaka eli-14, kunye neqela elilawulayo elinguAmanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams no Ashley Banjo .
Ukudanisa kwi-Thin Ice ngeTorvill kunye neDean- ITV
Iimoya: Usuku lonyaka omtsha, 9pm
Kude kube ngoku, uJayne Torvill kunye noChristopher Dean abakaze bayotywe ngaphandle ngaphandle- kodwa kule mizuzu ingama-90 ekhethekileyo babeka elo lungelo ngokuya eAlaska.
Kwinkqubo, bazibonela ngawabo amehlo iziphumo ezibi zenguqu yemozulu njengoko benyanzelwa ukuba baye entlango ekude bayokuzingela umkhenkce wasendle, batyibilize naphi na apho banako, njengoko bafuna ukufumana indawo efanelekileyo yokudanisa iBolero ekhethekileyo.
UBilly Connolly: Ubumnandi-ITV
Iimoya: NgoMvulo wama-28 kuDisemba, nge-9: 30 ngokuhlwa
Umhlekisi ome-up wokuhlekisa uBilly Connolly ubhengeze umhlala phantsi ebutsheni balo nyaka, kwaye olu xwebhu lujonga ngokukodwa amanqaku amaninzi omsebenzi wakhe omangalisayo.
Eyakhelwe ngokujikeleza bhanyabhanya entsha kraca kunye noBilly ekhayeni lakhe eFlorida Keys, irhafu ithatha ukujonga emva kwimisebenzi yakhe yodumo ehlekisayo, enamaxesha akhe amakhulu okuma, umdlalo ongabonakaliyo kunye neengxoxo ezizodwa kunye nabanye babalandeli bakaBilly abadumileyo.
Ibali le-SM: I-TV ebukhoma-i-ITV
Imimoya: Usuku lomdlalo wamanqindi, 9:25 am
Kubabukeli beminyaka ethile, i-SM: iTV Live yayiyinxalenye enkulu yobuntwana- kwaye abalandeli abaninzi be-telly bahlangana okokuqala no-Ant no-Dec, ababebambe iindibano kunye no-Cat Deeley.
Le SM: iTV Live ekhethekileyo ijonge emva kwiminyaka emithathu yokuqala yomboniso ukusuka ngo-1999 ukuya ku-2001, kudliwanondlebe olutsha kunye no-Ant & Dec kunye neKati kulonwabo lwe-SM: iseti yeTV kunye nokujonga kulondolozo lweenkcukacha-kubandakanya Umceli-mngeni we-Ant, i-Wonky Donkey, i-Postbag dance, i-Pokemon Rap, i-Dec's kwi-Sabrina i-Teenage Witch ne-Friends parody, i-Chums.
Iintaka zeentsiba ezikhethekileyo zeKrisimesi- ITV
Imimoya: Eva ngeKrisimesi, 9:15 pm
I-Classic sitcom Iintaka zeentsiba zibuyelela okhethekileyo okukodwa, ukujoyina abalinganiswa kwiminyaka emithathu emva kokuba sibabonile. Okwethutyana badlulile kwiinguqu ezimbalwa - uTracey noDorien bebesoloko befumana ilungelo lokufumana into elungileyo, ngelixa uSharon ebalekele kwelinye icala lehlabathi kwaye ebambelele kuhambo lwe-COVID.
U-Linda Robson no-Lesley Joseph bazakuphinda indima yabo njengo-Tracey Stubbs no-Dorien Green kwesi siqendu, kodwa inkwenkwezi yesiqhelo uPauline Quirke akazukubandakanyeka njengoko ebuya umva ekusebenzeni ukuze agxile kwizikolo zakhe zobugcisa ezenziwa kwilizwe lonke ezingama-200.
Indawo engenanto -I-BBC enye
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-7pm
UBradley Walsh ubamba isiqephu esikhethekileyo somboniso weklasikhi, njengoko abantu abadumileyo abathandathu bekhuphisana ukuzalisa izithuba kwaye bazama ukuphumelela amabhaso aphezulu abakhuphiswano abanethamsanqa. I-BBC ithembise ukuba iNcwadi yokuHlola engenanto kunye nePen iya kwenza ukubuyela kulo msebenzi ukhethekileyo.
Zog kunye noGqirha beFlying- BBC Inye
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-2: 35 ntambama
Ayizukuba yiKrisimesi ngaphandle koopopayi abanomtsalane ukugcina lonke usapho lonwabile, kwaye kulo nyaka i-BBC iphinde yajika yaya kwindalo yomlingo yombhali weGruffalo uJulia Donaldson. Le nkqubo ilandela u-Zog, uPearl no-Gadabout ohamba ngenqwelomoya kunye neziganeko emva kokufika ngenkani ebhotwe ebona uPearl evalelwe ngumalume wakhe - uZog noGadabout benomsebenzi wokumhlangula.
Kwaye ukuba inkcazo yebali ayivakali inomdla ngokwaneleyo, linda ude uve uZog kunye nooGqirha beFlying: uLenny Henry (Broadchurch), uRob Brydon (Gavin noStacey), uPatsy Ferran (Black Narcissus), uHugh Skinner (Mamma Mia : Apha Siya Kuphinda), uDaniel Ings (Lovesick), uMark Bonnar (Quiz), uLucian Msamati (iiNtloko zeNtetho zika-Alan Bennett) kunye no-Alexandra Roach (Ukubulala uEva) bonke babolekisa amazwi abo kwimveliso.
Roald & Beatrix: Umsila weMouse enomdla-kwi-Sky One
Imimoya: Eva ngeKrisimesi, ngo-8: 15 ngokuhlwa
Lo mboniso bhanya-bhanya wethelevishini wemizuzu engama-90 uxela ibali lentlanganiso phakathi kwababhali babantwana abathandekayo beli lizwe, uRoald Dahl noBeatrix Potter xa owayeneminyaka nje emithandathu ubudala.
Ibali elidlalisiweyo likaRoald noBeatrix babalisa ngendlela intlanganiso eya kuqhubeka ngayo ukukhuthaza uDahl ngokubhala kwakhe kwaye ibandakanya i-stellar cast ekhokelwa nguDawn French njengoMbumbi, ngokujika okuxhasayo okuvela kuRob Brydon, Nina Sosanya noJessica Hynes.
Quownin Blake's Clown -Isiqendu 4
Imimoya: Usuku lweKrisimesi, ngo-7: 45 ntambama
Isiteshi 4 sikwanomtsalane wokubhiyozela oopopayi abaqala ngoSuku lweKrisimesi- uhlengahlengiso lwencwadi yabantwana ethandekayo kaQuentin Blake. Ichazwe ngu-Helena Bonham Carter, inkqubo yesiqingatha seyure ibalisa ibali lomdlalo wokudlala oqalisa iphulo lokufumana ikhaya elitsha lothando emva kokulahlwa ngumthwalo weethoyi ezindala ezilahliweyo.
IKrisimesi yokuqala yoSana lweReindeer - Isiteshi 4
Imimoya: Ngosuku lweKrisimesi, ngo-6: 40 ntambama
Olu xwebhu lusisa kwiindawo ezimangalisayo zaseScotland kwaye lilandela iqela leenyamakazi ezincinci ezilungiselela iKrisimesi yabo yokuqala - xa behlala becelwa ukuba babekho kuzo zonke iintlobo zeminyhadala kunye nemibhiyozo.
Ngaphandle kwempembelelo yeCovid-19 kunye nenkxalabo elandelayo yokuba iiholide ezininzi ziyakucinywa, iqela laseCairngorms lihamba ixesha elide ukuqinisekisa ukuba inkqubo eyodwa yokondla nokuqeqesha umhlambi awuphazanyiswa.
IWorzel Gummidge: Saucing uNancy - BBC Inye
Imimoya: Eva ngeKrisimesi, ngo-5: 55 pm
Emva kwengcali ezimbini eziphumeleleyo kunyaka ophelileyo, uMackenzie Crook ubuya njengoyena mfanekiso wesoyikisayo wolunye ulonwabo oluzalisekileyo. Ngeli xesha ujikelezayo, undwendwela iscrapyard kunye noSusan noJohn kwaye uyakuva ukukhalaza komhlobo omdala onomlomo ongcolileyo - intloko yenqanawa eqingqiweyo, uSaucy Nancy. UNancy akathandanga nto ngaphandle kokubuyela elwandle, kwaye iwela kwi-trio yethu yeqhawe ukuya apho, okuthetha ukuba inqabileyo enqabileyo eSpatterbrook yeWorzel Gummidge.
Ithembisa ukuba yenye into emnandi yokuphatha iKrisimesi ngezifundo ngobuhlobo kunye nokuba ngowayo, kwaye amaphenyane abaxhasi abaphambili abaxhasayo- uShirley Henderson, uVannessa Redgrave noBrian Basikelelekile bonke banendima kwezikhethekileyo.
Emva koNgemva koko : UJack kunye neBeanstalk -I-BBC enye
Iimoya: NgoLwesithathu nge-23 kaDisemba, nge-8pm
Emva kwempumelelo yeCinderella yonyaka ophelileyo, uDavid Walliams ubuya nomnye umdlalo ohlekisayo weyure malunga nento eyenzekayo kwiintsomi emva isiphelo sebali. Eyona nto kugxilwe kuyo ngeli xesha nguJack kunye neBeanstalk, kunye noWalliams ngokwakhe obekade ekhazimla njengesigebenga kunye nesamente exhasa uSheridan Smith noBlake Harrison.
Kule nguqulo, kunokuba asweleke emva kokuba ewile emhlotweni weembotyi, isigebenga siyasinda ngengxubakaxaka, sizifumanele sihleli kwilali yabantu kungekho ndlela icacileyo yokubuyela kwinqaba yaso esibhakabhakeni.
Umnyama Narcissus -I-BBC enye
Iimoya: NgeCawa nge-27 kaDisemba-ngoMvulo wama-29 kuDisemba, nge-9 ngokuhlwa
Idrama enkulu yodumo kulo nyaka ivela kwiBlack Narcissus, uhlengahlengiso lwenoveli kaRumer Godden yowe-1939 malunga nokukhula kwempixano ngaphakathi kwikhonisithi encinci yoonongendi baseAnglican.
Iqela lokuyila linqunyanyisiwe umsebenzi ukuba liza kuphakamisa uguqulelo lwangaphambili lweli bali- ifilimu yowe-1947 iPowell kunye ne-Pressburger enegama elifanayo ithathwa njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo ngalo lonke ixesha. Kodwa le nguqulo intsha inokuxhomekeka kubalinganiswa abanetalente- kunye neenkwenkwezi kubandakanya uGemma Arterton, Alessandro Nivola, Aisling Franciosi, Jim Broadbent, Rosie Cavaliero kunye no-Diana Rigg ongasekhoyo.
Inyoka - BBC Inye
UJenna Coleman kunye no-Eddy's Tahar Rahim star kule drama intsha yokubulala eqala ngoSuku loNyaka oMtsha kwaye iya kuqhubeka ngezavenge zeveki ukuya ku-2021. I-Serpen t, esekwe kwibali eliyinyani, uthotho lwamaxwebhu olwaphulo-mthetho lukaCharles Sobhraj, a Indoda eyayingumsolwa ophambili ekubulaweni okungasombululwanga kwabahambi abali-12 baseNtshona ngaphesheya kweIndiya, Thailand naseNepal ukuya kuthi ga ngo-1975 nango-1976.
Iziporho ezikhethekileyo zeKrisimesi- i-BBC enye
Iimoya: NgoLwesithathu nge-23 kaDisemba, nge-8: 30 ngokuhlwa
Kuluhlu lwayo lokuqala ezimbini, le sitcom imangalisayo evela kwiqela leMbali Ezoyikisayo iphumelele ibutho labalandeli, kwaye bavuzwa ngeyona Krisimesi yabo ikhethekileyo kulo nyaka.
Isiqendu sibona uAlison noMike belungiselela ukwamkela usapho lukaMike ngeKrisimesi kwiNdlu yeQosha, njengoko bezama ukuyenza iphumle kangangoko kunokwenzeka ngelixa begcina iziporho ezininzi zonwabe- kodwa kuvela iKrisimesi ayisiyonto imnandi xa ' uswelekile. Kukho umba omncinci wokufika okutsha endlwini, onyanzela uJulian ukuba ajongane neziphoso ezidlulileyo ebomini bakhe, ngendlela ecocekileyo kwibali leKrisimesi kaCarol.
UGqr Seuss ’The Grinch Musical! -Isibhakabhaka esinye
Iimoya: NgeCawa yesi-2 ngoDisemba, ngo-3: 30 ntambama
Uhlobo olwenziweyo lomdlalo weqonga osekwe kwiklasikhi kaDkt.Seuss weKrisimesi, kunye noMatthew Morrison kwindima ephambili. Iingoma ezibethwayo Ungu-Kuthethwa, uMnumzana uGrinch kunye neKrisimesi eyamkelekileyo zibandakanyiwe, njengoko i-Grinch ifumanisa ukuba kuninzi kwiKrisimesi kunokuba wayexoxisana ngayo.
Amakhwenkwe kaNkosk. AmaKrisimesi aKhethekileyo
Iimoya: Usuku lweKrisimesi, i-10pm kunye noMhla woNyaka omtsha, ngo-10pm
Bekukho isiqendu seKrisimesi saMakhwenkwe kaNksk. Brown minyaka le kangangeminyaka elishumi, kwaye leyo yinto enye engatshintshiyo ngo-2020 - kunye no-Agnes kunye nosapho babuyele kwezinye iiholide ezimbini ezizodwa.
Eyokuqala, ebizwa ngokuba nguMammy Of The People ibona inzala kaBrown izama ukumelana nesiqhelo, ngelixa uAgnes noWinnie belinde ukufumanisa ukuba baphumelele Amaxesha eradio ukhuphiswano lokwenza enye intetho kaKumkanikazi. Isiqendu sesibini, esinesihloko esisebenzayo senkumbulo zikaMammy, ubona usapho luzama ukumelana nobomi emva kokutshixwa.
I-Vicar yeDibley eLockdown -I-BBC enye
Iimoya: NgoMvulo wama-21 kuDisemba, ngo-8: 50 emva kwemini
Kunyaka ophelileyo ndibone ukubuya kukaGavin noStacey kwiminyhadala eyaziwayo, kwaye le Krismesi enye i-BBC sitcom ibuyile kwizikrini zethu, njengoko iDawn French ibuya njengoGeraldine Grainger. Kuza kubakho imizuzu emithathu ye-10 yeVicar yeziqendu zeDibley, nganye isetwe ngamaxesha ahlukeneyo kulo nyaka umangalisayo: enye ngexesha lokutshixa, enye emva kokutshixwa, enye phambi kokuvalwa kwesibini.
Baza kugxila ekubhaleni kukaGeraldine kwaye bahambise iintshumayelo kumarhamente akhe nge-Zoom, kubandakanya izihloko ezinje ngokuba ayingombono olungileyo ukuvumela u-Owen Newitt ukuba asike iinwele zakho okanye enze iwayini eyenziwe ekhaya, indlela ahamba ngayo uAlice Tinker isabalulekile ubukho elalini, kwaye abanye babahlali basajonga njani amaqhosha alahlekileyo kunye nokufika kwesilinganiselo.
I-Big Fat Quiz yoNyaka ka-2020-Isiteshi 4
Iimoya: Usuku lomdlalo wamanqindi, ngo-9: 05 emva kwemini
Imibuzo yonyaka ebibanjelwe nguJimmy Carr ibuyile, nabahlekisi abathandathu bephendula imibuzo malunga nento ebikhona, masijongane nayo, unyaka obalulekileyo. Njengangaphambili, ezinye ii-superstars ziya kuba nazo ukubuza imibuzo, kubandakanya iMitchell Brook Primary School, uCharles Dance noJon Snow. Abahlekisi abathathe inxaxheba kulo nyaka nguJames Acaster, uStacey Solomon, uDavid Mitchell, uMaya Jama, uRichard Ayoade noJoe Lycett.
Umbutho wabo: Iqela leKrisimesi- iZulu elinye
Iimoya: NgoLwesine nge-17 kuDisemba, nge-9 ngokuhlwa
I-League yeQela labo leKrisimesi lelinye lawona ambalwa azakuqhubeka kulo nyaka, njengoko uJamie Redknapp, uFreddie Flintoff noRomesh Ranganathan bebuya kumnyhadala walo nyaka we-quiz yezemidlalo yamahlaya, bejoyine uluhlu lweendwendwe ezaziwayo.
Ukupheka okuhle kweKrisimesi- Isiteshi 4
Imimoya: Eva ngeKrisimesi, 7:40 pm
Abadlali abane bangaphambili beBritish Bake Off bayamenywa ukuba babuyele ententeni emhlophe ukulungiselela ukhuphiswano lomdyarho oluthandwayo, kunye nabo bakhuphisanayo kubandakanya uJamie noRosie ukusukela ngo-2019, uRuby ovela ngo-2018 noJames ovela ngo-2017. Paul Hollywood, Prue Leith kunye noMat Lucas bayadityaniswa yi-Bake Off: Abamkeli boochwephesha uTom Allen, ogcwalisa ukungafumaneki kweNoel Fielding.
Pandemonium -I-BBC enye
Iimoya: NgoLwesithathu nge-30 kaNovemba, ngo-9: 45 emva kwemini
Le sitcom intsha kraca ine-stellar cast kubandakanya uKatherine Parkinson (Isihlwele se-IT), uJim Howick (Ghosts), uAlison Steadman (Gavin & Stacey), uTom Basen (Emva koBomi) kunye noTori Allen-Martin (Onyulu) kwaye ulandela usapho lakwaJessop , abasandula ukufumana amava obusuku bodwa.
AbakwaJessops bathatha isigqibo sokuba bafuna iholide yehlobo nangayiphi na indleko, kwaye ke baya eMargate ngoDisemba kwilinge lokugqibela lokuchitha ixesha elininzi elifunekayo losapho kunye.
Umboniso oGwenxa: Ubuzalo - i-BBC One
Imischief Screen encinci 2019 / Ben Blackall
Imimoya: NgoLwesibini nge-22 kaDisemba, ngo-7pm
Iqela elingemuva komdlalo odlalayo oza kuphinda ubuye ngokungalunganga ngomnye umnyhadala, kunye noMbutho weDrama weCornley ngeli xesha ubonelele ngeyona ngxelo idumileyo yeKrisimesi: Ukuzalwa kukaYesu.
Ewe, kungekudala izinto ziya kuthabatha ithuba eliyintlekele, kunye ne-pop-up book ebonakalisa ingozi ebonakalayo kubo bobabini abadlali kunye ne-crew, iNgelosi uGabriyeli ikhulisa ukutyeba komlilo, kunye nabadlali ngaphakathi kwe-esile bewa kakubi ngenxa yoko. Ubuze obungenasidingo. Kwaye ayichazwanga nento yokuba usana olunguYesu lutyiwa yigusha…
UVictoria Wood: Uluhlu oluyimfihlo -I-BBC ezimbini
Le ntlawulo yintsomi yamva yamahlaya ibala phantsi uluhlu oluthathwe ngesandla lwamaxesha omsebenzi awuthandayo eVictoria, eyafunyanwa kwincwadi yamanqaku emva kokuba wasweleka ngo-2016.
Kuzo zombini iziqendu zeeyure ezimbini, le nkqubo inemifanekiso engaphezulu kwama-20 kwimisebenzi yakhe emininzi ukongeza kwimibono yobomi bukaVictoria, kubandakanya neziqwengana ezivela kwindawo yogcino lobuqu. Kukho igalelo elivela kwinani lobuso obaziwayo.
I-Upstart Crow yeKrisimesi ekhethekileyo - i-BBC ezimbini
Iimoya: NgoMvulo 21 Disemba, 9pm
Kwangoko kulo nyaka, besisoloko sikhunjuzwa ngendlela uShakespeare abhale ngayo uKing Lear ngelixa evalelekile, kwaye esi siqendu sigqibeleleyo se-sitcom Upstart Crow sigxile kwimizabalazo awayejamelene nayo uBard njengoko wayezama ukubhala iklasikhi ngexesha lokuvalelwa okunyanzeliswa sisibetho.
Eyona nto kukuba, uShakespeare uyasokola ngenkuthazo yenkuthazo, ngelixa kuye kwafuneka aqinisekise ukuba yena noKate bayakwazi ukonwabela iKrisimesi emyoli ngaphandle kokubona umntu abamthandayo. UDavid Mitchell kunye noGemma Whelan inkwenkwezi kwesi sibini.
I-Mortimer kunye ne-Whitehouse: Ukuhamba kweKrisimesi yokuLoba-i-BBC ezimbini
Mortimer kunye neWhitehouse
Iimoya: NgoLwesithathu nge-23 kaDisemba, ngo-6: 30 emva kwemini
Ngaphaya kwamanqaku amathathu, uthotho olunzulu ngobunono luye lwaba lolona boniso lubalaseleyo kumabonwakude, kwaye uBob noPaul babuyile kwiminyhadala ekhethekileyo njengoko beloba iGreyling kuMlambo iEsk kunye neeTee kwidolophu yakuloBob iMiddlesborough.
Kwangelo xesha uBob ujonge ukuzisa umsebenzi weKrisimesi kuPaul - okhule egxeka malunga nentengiso yomnyhadala- ngokubamba itheko lababini, ukupheka isidlo sangokuhlwa esingalibalekiyo kunye nokudibana nomfana walapha uChris Rea, owathi yeengoma zomculo zepapa ezihlala ixesha elide.
I-Chitty ibhabha kwakhona noDavid Walliams - Ijelo 4
Iimoya: Usuku lonyaka omtsha, ngo-7: 30 ntambama
Umboniso bhanyabhanya owenziwa nguDavid Walliams ubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-50 sikaChitty Chitty Bang Bang ngokuzama ubunjineli bobuqhetseba obungenanjengabanye - unethemba lokuzisa umlingo weklasikhi ongapheliyo ebomini ngokwakha ubomi benene Imoto eyiChitty Bang Bang. oko kuyakubhabha!
Umnyhadala womsebenzi okhethekileyo - Isiteshi 4
Ngethuba lokuqala, iingcango zeCottage Catch ziya kuvulwa ukwamkela ubuso obutsha obutsha be-Taskmaster festive- iinkwenkwezi zibekwe imisebenzi nguGreg Davies kunye no-Little Alex Horne kubandakanya u-Mummy kaJohn Hannah, umsasazi weChannel 4 uKrishnan Guru -Murthy kunye neDerry Girls 'uNicola Coughlan. Ukwenza umgca wokudibana ngumbonisi uRylan Clark-Neal kwaye ngokungqongqo Yiza ijaji yokuDanisa uShirley Ballas.
Ufuna enye into ukuba ubukele? Jonga isikhokelo sethu seTV.
uTracey noDean basakunye
imizekelo ye-oxymoron kwiingoma
indlela yokongeza abahlobo ekunqumleni izilwanyana
ixesha lokukhululwa kwe-odolo ye-2
iqala ngabani ixesha iqakamba